Warbixin Qoto-dheer Dhismihi Maamulka Jubbaland dhibkii laga soo maray iyo sida ay u dhicisawday maanta waa laba kala dheer! | kowtharmedia.com
Home WARAR Warbixin Qoto-dheer Dhismihi Maamulka Jubbaland dhibkii laga soo maray iyo sida ay u dhicisawday maanta waa laba kala dheer!
Warbixin Qoto-dheer Dhismihi Maamulka Jubbaland dhibkii laga soo maray iyo sida ay u dhicisawday maanta waa laba kala dheer!
Sidii la isku ogaa waxay ahayd in dhidibada loo yagleelo maamul dawlad-gabaleed dadku wada yeeshaan, waxayse ku dambaysay maanta in dadaalkii la soo galay, hal bacaad lagu lisay laga yeelo, bulshada reer Jubbaland inta caqliga u saaxiibka ah waxaan halkan ugu so gudbinyaa waarbixin qoto-dheer oo ka tarjumaysa xaqiiqada maanta jubbaland ka jirta iyo sida wax u qaldameen ee loogu baahan yahay in dhaqso loo saxo.Maahmaah somaliyed baa odhan jirtay Fooli timaayaba gudo qarsimo hadhan”
Cadaalad daro, xasuuq iyo Dulmi joogto ah, ka dib markii ay soo daashadeen ayey dadka deegaamada guud ahaan dawlad-Goboleedka Jubbaland waxay gudoonsdeen inay dhistaan maamul xalaal ah oo arimahaa looga baxo, isla markaana waxay u arkeen Mudane Ahmed Islaan (Axmed Madoobe) in u yahay Nin dhaxdhaxaad aha oo akhlaaq iyo Diin leh kuna qanceen in uu cadalad xaqsoor , dulmi la’aan ku maamulo bulsha waynta halkaas degen.
Waxaa Maamulka Jubbaland lagu dhawaaqay 3 April 2011, waxaanay Dowlada dhexay aqoonsatay 29 August 2013 ka dib Muran iyo qabqabsi dheer oo dhax-maray Maamulka iyo Dowlada Dhexe ee Somalia.
Dadka deeganka uma aysan u kala harin taageero in aay ku bixiyaan taas oo ay ku nafwaayeen kuwa badan kuwa kale ku dhaawac meen.
Waxaa jirtaa mahmaah somaliyeed oo dhihi jirtay “Waxaan ku mooday ama waxaad noqotay, waa waxaan loo noqon doonin”.
Ahmed madoobe ka dib markiii u Helay dhaqaalo iyo ciidan dhisan wuxuu noqoday nin aan qiimaynin dadka deegaanka gaar rer waamo wuxuu bilabay in uu ku haadaaqo erayo tusayo wax qiimo inuusan u haynin sida Erayadan Reer Waamo dad ma aha erayaadasoo lagu yaqaanay asaga iyo dadka lamidka aha.
Waxaa kale uu Ahmed Madoobe bilaabay Nin jeclaysi , qabyaalad iyo Masuq maasuq.
Madaxda iyo maamulayaasha wuxuu u magacaabe si aan qarsoodi lahayn ilama adeertiisa iyo rag aay saaxibo yihiin . Dad kiwi rer Waamuhu waxaay ka noqdeen dhulkoodii Marti aan la ixtraamaynin oo aay usii dheer tahay Aflagaado oo ah Dad wax ah matihiin in la idin Taliyo Moyee.
Gaar aahaan Waxaa xusid mudan Magaalada Afmadow waxa uu muumulka Ahmed Madoobe ka bilaabay Mashruuc barakicin ah oo Laguna barakicinayo dadka magalada degen .
Magalada Waxaa gacan adag ku hayaa Nin aay Ahmed Madoobe ilmo adeer yihiin oo si naxariis daro ah ula dhaqmayo bulashada meesha degen .waxaad mooda in u yahay ninkaas
Xaaduq gaamuray oo uu Abwaan Dhoodaan lahaa “ kac gardaadi wiil lama yiraahdo xaaduq gaamuray. Taas oo dib dadka deeganka did uxusuusiye Taliyashii Dowldii Kacaank oo xasuuq, xabsi oo aan maxkamd lahayn.
Wuxuu si aan qarsoodi ku jiri. U sheegay in u magalada ku celinayo qaab dhismeedkii aay a Hayd Shan iyo labatan sano ka hor. Taas oo aay macnaheedu tahay in lanburburiyo wixii Dowlda Kacanka dabadeed la dhisay si aay Magalo yar Dad yar ay degen yihiin.
Waxaa xusid mudan Dowlda Kacaanka ka dib in uu magalada ku dhacay is aden wayn oo ku saabsan xaga dhismaha iyo shacabka taas oo macanaheedu tahay in ay Magalada xaga dhismaha iyo Bulshada afar jibaarmay. Waxaay dadka u Baden yihiin Dad ka soo galay badiyaha oo xoolihi ay abaaraha ka dhameeyeen. . Barakacayashu waxaay ubadan yihiin hal rer ama Hal qows layiraahdo Rer Caamir. Dad badan baa aaminsan Mashruuc barakicinta ama gurya duminta ujeedadu tahay in la shimonoseki shacbida ama isbadalka aay dadka badiyaha ka soo gale in lagu dhimo. Dhanka kale Markaad Maamulada Hoos ufiiriso waxaa ku muuqanayaa Cadalad darada, Eex ama Xaqdaro Oo aan Geed loogu soo gabanin.
Tusaalo Yar Xaga dhismaha Maamulada Gaar ahaan Dhoobleey
1Taliyaha ciidanka Haybe Dhagool ( rer ka Ahmed madoobe)
2 finance ama dhaqaalaha. Asad Dhangjar ( rer ka Ahmed madoobe)
3Taliyaha Gaadiidka. Abshir Caato (rer ka Ahmed madoobe)
4Madaxa Arimaha Bulshada Abdinasir Mohamed ( rer ka Ahmed madoobe)
5 Gudoomiha dhalinyarada Kaafi Dhegjar ( rer ka Ahmed madoobe)
6 Madaxa Caafimaadka Nuur Bixi. ( rer ka Ahmed Madoobe)
7 Uruka Hawaynka Ardo Ahmed ( rer ka Ahmed Madoobe
Magaalooyinka side Kismaayo waa sidan
1 Finance ama Maaliyad Ahmed madoobe seedigisa oo aay isku rer yihiin ( zakariya
2 Madaxa Bankiga. Macalin Liibaan ( rer ka Ahmed madoobe)
3 Talyaha Madaxtooyada Mahad ( Rerka Ahmed madoobe)
4 Taliya ku xigeenka ciidanka Guud ee Jubbaland Muqtaar ( rer ka Ahmed madoobe)
5 Taliya ku xigeenka Sedaxaad. EE Nabad sugida Sanjeev ( Rerka Ahmed Madoobe)
6 Oppression police office ama Howlgeliye Maxamed dheere ( rer ka Ahmed Madoobe)
7 Abaanduulaha guud Ciidanka Jubbaland. Ahmed Niiniile ( rer ka Ahmed madoobe)
8 Taliyaha Takeda Kismaayo port Abdi Shakir ( rer ka Ahmed madoobe)
9 Agaasimaha Madaxtooyada Abshir waa ninka kale EE deeganka ah
Waxaad moodaa in ay tahay qualification ama Kartida shaqada Jubbaland lagu helo in aay tahay in aad noqtid Ahmed Madoobe rerkiisa .Tani waxaay an xuusinaysa Dowldii Militariga ahayd dhaqnkeedii foolhardy xumaa EE Somalida ka dhiidhisay oo aay natiijada noqotay in uu wadankii burburo. Dhanka kale waxaan iswaydiiyaa tallow Mudan Ahmed Madoobe ma ninkii Dulmi diidka, Cadalad do ka ahaa naftiisa hails ugeliye la dagaal aka Codowkga Somaliyeed . Ama waa ninkale oo Xabsida Adissababa lagu soo badelay waa su,aal iidaashatay oo aan jawaab ulahay.
Hadaba waxaan baaq u dirayaa Dadka deeganka oo lagu magc daro rer Waamo.
Waxaad is waydiisaa Su,aashan hadii aad wax baratay oo aad magalada ama gobolka aad udhaltay aad wax ka noqoni karin oo ninkii shalay yimi oo ka qiimo badan yahay oo Wilba ku xaqirayo Adeerada ama Abaayasha la barakicinyo aqalada lag duminayo maxaay nolasha ku tahay, sidaas daraadeed waxa inoo wada muuqan karta in nidaamkii dawladnimo ay wax wayni ka khaldameen loona baahan yahay in si deg deg tallo guud looga yeesho inta aysan arimo farah ka sii bixin.
Waxa qoray Abdullahi Sh Barre
Previous PostDaawo MuUQAAL: Maamulka Soomaaliland oo Sheegay inay Shalay Qabteen Ciidamo Liyuu Boolis ah, Kadib maxaa dhacay? iyaga oo dhahay "Itoobi aabe fiican waaye"! Next PostWar Deg deg: Ciidamada amniga oo gacanta ku dhigay ninkii watay gaari goor dhaw ku qarxay Waddada Afasiyoone!!